Vovon-tsakafo Cookie mainty boribory miaraka amin'ny sarony, China Box Black Cookie vita amin'ny tin mainty miaraka amin'ireo mpanamboatra sarony, mpamatsy, orinasa - G STAR TRADING LIMITED
Kitapo fonosana kosmetika
Afaka fonosana tinety festival
Saka am-bala vita amin'ny vifotsy
Kitapo fonosana ao an-trano
Milina fanamboarana vifotsy
Fitsipika sy politika
Kitapo vita amin'ny vifotsy sy milina fanaovana tin izay nanomboka tamin'ny 2010
Home>Tin Can Boxes>Saka am-bala vita amin'ny vifotsy
Round Black Tin Cookie Box with Lid
Toerana niaviany: Shina
Brand Name: G STAR
Model Number: TB0057
Fepetra takiana minitra: 5000PCS
Ora nanomezana: Manodidina ny 30days
Payment Terms: Amin'ny alàlan'ny T / T, fametrahana 30%, fifandanjana alohan'ny fandefasana
Supply Fahaiza-: 500000000 isam-bolana
Fanontaniana Ankehitriny →
This round black tin cookie box with lid meets international food safety requirements, can directly contact food, and can pass various food safety tests. All our products have passed SGS, Intertek and other third-party inspections many times and meet the requirements of safe food.
Ny fanaovana pirinty amin'ity vifotsy ity dia fomba fanontana offset. Ny fanontana ivelany dia azo atao pirinty amin'ny loko efatra (CMYK) na loko pantone mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa, verinia manarona na menaka matte. Ary ao anaty tin dia afaka manafatra menaka mangarahara sy menaka volamena. Izy io koa dia azo atao pirinty misy lafiny roa arakaraka ny mpanjifa .Ny karazana lamina mahafinaritra rehetra dia takiana hatao pirinty.
Azo ovaina ny fomba fanontana sy ny endriny. Ny ambany dia mety ho fanontana printy sy kaody bara. Ny sarom-bifotsy dia azo atao amin'ny sokitra samihafa, ary ny vokatra hafa toy ny varavarankely misokatra amin'ny firakotra firara. Azontsika atao ihany koa ny manao laser sy inlay effets manokana toy ny fandavahana, sns., Tongasoa amin'ny famotopotorana!
Product Name Round Black Tin Cookie Box with Lid
Fitaovana 230mircon na tinplate matevina namboarina
Size 120 * 65 (H) MM
Fanontana / Logo Custom
Construction sarony + vatana + ambany
Sample / bobongolo mitarika fotoana eo amin'ny 15 andro eo ho eo ho an'ny bobongolo exsiting; 20-25 andro eo ho eo ho an'ny bobongolo vaovao (aorian'ny nahazoana ny fandoavam-bola ary nohamafisin'ny haikanto)
Ora nanomezana 30-35 andro eo ho eo aorian'ny fanekena sy fandraisana
Payment Term Amin'ny alàlan'ny T / T, fametrahana 30%, fifandanjana alohan'ny fandefasana
Use to pack cookies,other foods.
1. Inks rehetra fanontana pirinty ho an'ny boaty / kapoaka firy, ao anatin'izany ny famokarana, fonosana ary fitahirizana, mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fiarovana ny sakafo.
2. Mihoatra ny 10 ny tsipika famokarana mandeha ho azy ho an'ny boaty tin / tin firapotsy, fiasan'ny OEM an'ny manipulatera, kalitao azo antoka ary fandefasana azo antoka.
3. Ny boaty fanitso sy ny kapoaka dia apetaka amin'ny atrikasa tsy misy vovoka, miaraka amina fitaovana fanandramana vokatra matihanina isan-karazany.
4. Manana traikefa an-taonany maro izahay amin'ny fanondranana boaty fanitso. Ny vokatra tinplate toy ny fitoeram-boankazo isan-karazany, boaty fanomezana sns dia amidy any Eropa, Amerika ary firenena hafa.
5. Manana santionany haingana izahay, vidin'ny fifaninanana, avo lenta ary ekipa fitantanana kalitao matihanina.
6. Maherin'ny 1,000 andiana boaty firapotsy sy firapoka firy no afaka mamaly ny filan'ny mpanjifa amin'ny famonosana boaty firapotsy.
7. Misy injeniera matihanina 10 amin'ny fanamboarana vifotsy, izay mahafeno tanteraka ny fepetra takian'ny mpanjifa amin'ny fizotran'ireo kapoaka firavaka
No. 322, Yinqiao Road, Shaoxing, Zhejiang, Sina